Muqdisho oo la keenay askartii ku dhaawacantay dagaalkii ka dhacay gobolka Bakool - Awdinle Online
Muqdisho oo la keenay askartii ku dhaawacantay dagaalkii ka dhacay gobolka Bakool
Magaaladda Muqdisho waxaa laga soo dajiyay Ku dhowaad 15 askari oo ku dhaawacmay dagaal ay shalay Al-Shabaab ku qaadeen degaanka Abal oo qiyaastii 18 KM u jira degmada Xudur ee gobolka Baay ee Koofur Galbeed Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ciidamadaan la geeyay Isbitaalada ay maamusho dowladda federaalka ah qaarkoodna ay qabaan dhaawacyo culus,oo ka soo gaaray dhanka lugaha iyo qeybaha sarre ee jirka ayna ku jirto rasaasta ama xabadaha.
Askartaan oo wax looga qaba waayay Xunta Gobolka Bakool ayaa loo soo qaaday Caasimada Soomaaliya sida saraakiisha sheegeen .
Wararka ayaa tilmaamaya in qaraxa uu ku dhaawacmay sarkaal sarkaal sare oo haystay ciidanka ku sugnaa deegaanka Abal isla markaa taliye u ahaa ciidankii hoggaamiye ku xigeenkii hore ee Al Shabaab Muqtaar Roobow Abu Mansuur.
Sarkaalka oo Magaciisa lagu soo koobay Sheekh Maxamuud ayaa haystay ciidankii lagala wareegay Sheekh Muqtaar oo fariisin ku lahaa deegaanka Abal ee gobolka Bakool.
Dagaalkii shalay barqadii ka dhacay degaanka Abal ee gobolka Baay oo ahaa mid xoogan ayaa lasoo wariyey in uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaarey darafyadda diriray.
Taliska Ciidamadda Soomaaliya oo aan soo hadal-qaadin waxyeeladda dhankooda ah ayaa tibaaxay in ay dileen 20 Al-Shabaab kamid ahaa.
Xaaladda goobtii lagu dagaalamay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ah mid degan.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya waxay tilmaamayaan in dhinacyadda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cabsi gelinaya shacabka caasimada gobolka Bakool.
Previous articleCumar (Filish) ” Xuquuqda Gobolka Banaadir rabshad in lagu raadiyo Ma aqbaleyno”
Next articleBanaanbax lagaga soo horjeedo hadalkii shalay ee Madaxweynaha oo Muqdisho ka dhacy